လှတဲ့သူတိုင်း ဆားဝက်ခြံရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဆားဝက်ခြံရှိနေတာတော့ ဘယ်သူမှ ကြိုက်ကြမယ် မထင်ပါဘူး …။ ဆားဝက်ခြံတွေဟာ နှာခေါင်း ၊မေးစေ့နှင့် ပါးပြင်တွေမှာ အများဆုံးဖြစ်လေ့ရှိပြီး ညှစ်ရင်လည်း ပွါးတတ်တာကြောင့် အတော်စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ် …။ ဒိထက်ပိုးဆိုးလျှင် အပေါက်အကြီးကြီးတွေဖြစ်ပြီး မျက်နှာမှာ ကြည့်ရဆိုးပါတယ် …။ ဆားဝက်ခြံ သက်သာစေတဲ့ နည်းတွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ် …
အဖေတူအမေကွဲအစ်ကို မှ ညီမဖြစ်သူအား သားမယား အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်မှု
အဖေတူအမေကွဲအစ်ကို မှ ညီမဖြစ်သူအား သားမယား အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့် ။ မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို.နယ် ကော. ခပုံကျေးရွာ အလည်ပိုင်း ရထားလမ်းအနီးနေ. ဒေါ်…. ၏ သမီး မ….. (၁၂)နှစ်အရွယ် ခလေးအား ဒေါ်….၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဦး…. ယခင် အိမ်ထောင်မှ ပါလာသော သား မောင်ပိုင်စိုးသူ (ခ) အဘိုင် ၂၁နှစ် မှ …